Ny fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika sy andiany amin'ny Apple TV 4 | Avy amin'ny mac aho
Fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika sy andiany amin'ny Apple TV 4 anao
Ny fahatongavan'ny Apple TV taranaka fahefatra efa ho herintaona sy sasany lasa izay dia midika fiovana marina amin'ny fomba fijerintsika fahitalavitra. Marina fa efa toy ny klisey ity, saingy ny fahamarinana tsotra, ary izay manana an'ity fitaovana ity ao an-tranony, ary tia horonantsary, andian-tsarimihetsika na fanadihadiana dia afaka manamarina izany. Ary na eo aza ny zava-misy fa ny vondrona haino aman-jery lehibe toa ny ATresMedia, Mediaset, ary na i Amazon aza dia mbola manohitra ny tsy tokony hataon'izy ireo sahady: mandefa ny fampiharana atiny ho an'ny Apple TV.
Fa aleo tsy mamita-tena isika, ny Apple TV 4, miaraka amin'ny rafitra fiasa tvOS mahafinaritra azy, dia tsy hisy raha tsy miasa mafy ny mpamorona maro, toy ny, raha ny fihetsika tsy takatry ny saina toy ny vondrona voalaza etsy ambony, Netflix na HBO dia tsy hanana akory tonga teto amin'ny firenentsika. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia tsy momba ny Apple TV, fa momba ireo rindranasa ireo, ny tsara indrindra amin'ny fahitako azy antonony, izay ahafahanao mankafy sarimihetsika an-jatony, an'arivony, andian-dahatsoratra, manadino indray mandeha ny momba ny doka.
1 Fampiharana kintana hijerena sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny Apple TV
1.3 RTVE Series sy Clan TV
1.4 Atsofohy sy Plex
Fampiharana kintana hijerena sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny Apple TV
Efa ampoiziko izany Ity lahatsoratra ity dia natao ho an'ireo mpamaky izay tia horonantsary sy / na andian-tsarimihetsika. Ao amin'ny Apple TV 4 dia misy fampiharana marobe amin'ny karazany rehetra, saingy mifantoka amin'ny atiny audiovisual isika anio.
Te-haminavina ihany koa aho fa ny sasany amin'ireto fampiharana manaraka ireto dia hiharihary amin'ny maro aminareo, saingy satria satria mazava ho azy ireo dia eto izy ireo. Hanomboka ve isika? Oh, ary raha ny tianao no misintona sarimihetsika maimaim-poana, mankanesa any amin'ilay rohy izay navelanay fotsiny.
Eny, eny, voalohany indrindra napetrakay ny fampiharana indrindra Netflix ho an'ny Apple TV, fampiharana iray miavaka amin'ny lafiny roa:
Ny kalitao lehibe, ny habetsany ary ny atiny maro karazana, na dia marina aza fa misy sarimihetsika foana izay tsara kokoa ny manadino.
Ny mampiavaka azy mpampiasa interface tsara sy ny logaritma soso-keviny.
Miaraka amin'ny Netflix ianao dia afaka mamorona mombamomba ny mpampiasa marobe, iray isaky ny mpianakavy, ary hianarin'ny rafitra izay tianao amin'ny fampisehoana tsy tapaka anao ny sarimihetsika, andian-tsary ary fanadihadiana izay mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana azy ireo. Noho izany, ny fizarana "Ny lisitra" dia mitombo haingana kokoa noho izay zakanao, ary rehefa mandeha ny fotoana, dia mianatra bebe kokoa hatrany izy, ary lasa marina kokoa.
Daredevil, Narcos, tranon'ny karatra, Dietin'i Santa Clarita ary anaram-boninahitra an-jatony maro hafa dia ohatra vitsivitsy monja amin'ireo ohatra hampitsoka ny sainao.
Tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ilay fampiharana HBO ho an'ny Apple TV Na izany aza, Ampahany amin'ity fifantenana ity bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny atiny fa tsy amin'ny kalitaon'ny fampiharana mihitsy. Westworld, ny Papa tanora, ny tariby, ny lohasaha Silicon, lalao ny seza fiandrianana, The Exorcist, Tabboo, sns., asehon'izy ireo ny kalitaon'ny atin'ny HBO, toy ny mahazatra, ankoatr'izay, na izany aza, mamela betsaka ny zavatra irina ny mpampiasa azy: tsy afaka mamorona mombamomba ny mpampiasa ianao, tsy afaka manampy andiany amin'ny lisitrao, fa ny toko tsirairay, ary ny Mazava ho azy fa tsy "marani-tsaina" toa an'i Netflix izany.
Na izany aza, raha tianao ny sarimihetsika sy ny andian-tantara dia tsy afaka ny tsy eo ny HBO.
RTVE Series sy Clan TV
Nahita serivisy fahitalavitra roa mikoriana izahay, izay, araka ny fantatsika, dia voaloa; na izany aza, ny tolotra, na dia voafetra aza, dia malalaka kokoa. Mametraka apps amin'ny andiany iray ihany aho Série RTVE, izay ahafahanao mankafy andian-dahatsoratra marobe amin'ny fitambarany, maimaimpoana ary tsy misy dokambarotra amin'ny fahitalavitra Espaniola, ary ClanTV, fampiharana mitovy amin'izany nefa miaraka amin'ny atin'ny ankizy ary amin'ny teny Anglisy ihany koa mba hahafahan'ny kely mianatra ity fiteny ity.
Samy maimaim-poana izy roa ary azonao atao ny misintona azy ireo mivantana avy amin'ny App Store an'ny Apple TV, ary samy manana ny kinova ho an'ny iOS izy ireo.
Atsofohy sy Plex
Raha tianao ny manana sarimihetsika, andian-dahatsoratra, horonantsary fanadihadiana, fandaharana alaina ao amin'ny Mac anao na amin'ny kapila mangirana ivelany, miaraka amin'ny manome na miaraka Plex afaka mankafy an'ity votoaty ity mivantana amin'ny Apple TV 4 ianao nefa tsy mila mampiasa AirPlay avy amin'ny fitaovana iOS.
Tsy handeha amin'ny antsipiriany momba ny tsirairay amin'izy ireo aho satria mety ho fampitahana be loatra, na izany aza, mamporisika anao aho handinika tsara sy hisafidy izay mifanentana indrindra amin'ny zavatra mahaliana anao. Avelako ho anao ny rohy misy azy roa.
Plex: Fandefasana fahitalavitra sy sarimihetsikamaimaim-poana
VidLib Izy io dia rindrambaiko mahafinaritra iray izay hotehiriziko farany. Azonao an-tsaina ve hoe afaka jereo ny atiny rehetra zaraina amin'ny pejy toy ny HDFull, Pordede, Series Dando, sns mivantana ao amin'ny Apple TV anao? Aza miresaka intsony. Mazava ho azy, ny VidLib dia fampiasa, na dia fantatro aza fa ny mpampiasa azy dia miasa amin'ny traikefan'ny mpampiasa izay hahagaga antsika.
VidLib no tranombokinao an-tsary fangatahana manokana.
Ho afaka mankafy fantsona vidéo amin'ny fangatahana amin'ny teny Espaniôla izay nampiana ny vondrom-piarahamonina ianao. Fa ny zavatra tsara indrindra dia ny manampy ny fantsonao horonan-tsary amin'ny tenanao sy mamorona ny fitahirizam-bokinao manokana.
Hikaroka sy hanaisotra ny rafitray, avy amin'ny tranonkala atoronao, ny lahatahiry horonan-tsary sy ny rohiny. Raha hitanao io dia azonao atao ny manampy ny tranonkala ho fantsona ao amin'ny lisitrao. Ary raha tsy azonao atao, satria ny tranonkala dia mbola tsy tohanan'ny algorithm, aza manahy ianao, azonao atao ny mandefa ny adiresy tranonkala mankany amin'ny boaty soso-kevitra avy amin'ny app.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika sy andiany amin'ny Apple TV 4 anao
Rodrigo camacho dia hoy izy:
Ary mitresaka sy mubi?
Valiny tamin'i Rodrigo Camacho
Miasa i Google mba hahatonga ny Chrome ho azo antoka kokoa amin'ny Mac
Raha ny fitsapana voalohany dia tsy manome olana amin'ny router ireo mpanara-maso LG Ultrafine 5K vaovao